သင့် ဖုန်း ကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အရာတွေ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > သင့် ဖုန်း ကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အရာတွေ
သင့် ဖုန်း ကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အရာတွေ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:09 AM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
စမတ်ဖုန်းတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြပေမယ့် သွားလေရာ သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီကိရိယာလေးတွေဟာလည်း စက်ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုတာ ပုံမမှန်ရင် ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေ တစ်ခါတလေ မေ့နေတတ်မှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ နာမည်ကြီးဟန်းဆက် အချို့ ပေါက်ကွဲခဲ့တာအပြင် သုံးစွဲသူ ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသေးအဖွဲပေမယ့် ဖုန်းကို အကြီးအကျယ် ပျက်ဆီးစေနိုင်တဲ့ အရာတွေကို စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. နေအပူရှိန်ကောင်းစွာရရှိသည့် ပြတင်းပေါက် သို့မဟုတ် စားပွဲပေါ်တွင် ပစ်ထားခြင်းကြောင့် အပူရှိန်လွန်ကဲခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက် ကနေ စူးစူးရဲရဲကျနေတဲ့ နေရောင်ခြည်ဟာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းပေါ် တိုက်ရိုက်ကျတဲ့ အခါ အပူလွန်ခြင်း (overheat) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမြင်ပိုင်းမှာ ဘာမှ မပြောင်းလဲပေမယ့် အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ဒီအပူချိန်တွေက ဘက္ထရီ နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကို ကျဆင်းစေပြီး အဆိုးဆုံး အနေအထားအဖြစ် ချစ်ပ်ဆက်ကိုပါ လောင်မြိုက်စေနိုင်တယ်။
၂. တွေ့ကရာ Software များကို install ပြုလုပ်ခြင်း
Hardware အစိတ်အပိုင်းတွေက သင့်ဖုန်းရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ချိန်မှာ Software တွေက သူ့ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း မရှိတဲ့ နေရာတွေက Software တွေကို download ဆွဲယူခြင်းဟာ ဖုန်းရဲ့ စွမ်းရည်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်ပြီး တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အချက်အလက်တွေ အခိုးခံရတာ၊ RAM မန်မိုရီပမာဏကို ခိုးယူသုံးစွဲနေတာ စသဖြင့် ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်တယ်။
၃. ဖုန်း အတွင်းပိုင်းကို စစ်ဆေးသန့်စင်မှု မလုပ်ခြင်း
ကိုယ်ထည် အသေတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဖုန်းအမြင့်စားတွေ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းခွံကို ခွာပြီး သန့်ရှင်းမှု ပြုလုပ်ပေးဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလို ကိုယ်ထည်တွေမှာ များသောအားဖြင့် အတွင်းကို ဖုန်မှုန့် စတာတွေ ဝင်နေပြီး တစ်ခါတလေ ဆိုးဆိုးရွားရွား ပိတ်ဆို့နေတတ်ပါတယ်။ လက်ကိုင်အိတ်ထဲ ထည့်ထားတာ၊ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး အပြင်သွားတာ စသဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းရတာ ခက်ခဲနေရင် နားလည်တဲ့လူကို ပြပြီး သန့်ရှင်းပါ။
၄. လမ်းသွားနေရင်း ဖုန်းကို ထုတ်ကိုင်ထားခြင်း
ဒါကတော့ ဟန်းဆက်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုထက် ခိုးယူခံရဖို့ကို ပိုအားပေးနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ ဖုန်းခိုးခံရမှု ၄၀% ဟာ ပိုင်ရှင်က လူကြပ်တဲ့ လမ်းမပေါ် ထုတ်ကိုင်ထားတုန်း လုခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူများတဲ့နေရာတွေမှာ ဖုန်းပြောမယ်ဆိုရင် နားကြပ်တပ်ဆင်ပြီး ပြောတာက ပိုသင့်တော်တယ်။
၅. ကာဗာမပါဘဲ အိတ်ထဲ ထည့်ထားခြင်း
ဖုန်းကာဗာအခွံတွေဟာ ဖက်ရှင်သက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်လက်ကိုင်အိတ်လို အရာဝတ္ထုများစွာ ပါဝင်နေတဲ့ နေရာထဲ ရောက်တဲ့အခါ ဖုန်ဒဏ်၊ ရေဒဏ် စတာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။ ဒါ့အပြင် အင်တာနက် အသုံးပြုနေရင်း လက်ကိုင်အိတ်ပူပူလောင်လောင်ထဲ ထည့်ရင်လဲ Overheat ဖြစ်တာ သို့မဟုတ် ထိမိပြီး malfunction ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
၆. မူရင်းဘက္ထရီကို ဈေးပေါတဲ့ဟာနဲ့ မလဲဖို့
ဖုန်းဘက္ထရီတွေကတော့ ဟန်းဆက်တစ်လုံးရဲ့ မော်တာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင် ငွေကြေး ကုန်ကျမှာကို မနှမြောပဲ သေချာလေ့လာပြီးမှ လဲလှယ်ဖို့ စဉ်းစားပါ။ မူရင်းအစိတ်အပိုင်းနဲ့ မတူညီရင် ဘက္ထရီ သက်တမ်းကို အကြီးအကျယ် လျော့ကျစေပြီး ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။
၇. ဖုန်းရဲ့အပေါက်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာထိုးဆွပြီး သန့်ရှင်းမှု မပြုပါနဲ့
ဖုန်းရဲ့ စပီကာ စတဲ့အပေါက်တွေထဲ ဖုန်တွေရှိနေတာ ဘယ်သူမှတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ ဖုန်းကို အပူချိန် မြင့်တက်စေသလို စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ကျစေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ လေမှုတ်စက်၊ သံချွန် စတာတွေနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့်အစား နည်းစနစ်ကျကျ သန့်ရှင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူကို ပြပါ။ အထဲမှာ အင်မတန် နုနယ်သိမ်မွေ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိနေဖို့ သေချာပါတယ်။
၈. ဘောင်းဘီနောက်အိတ်ထဲ အမှတ်တမဲ့ မထည့်ပါနဲ့
iPhone6ထွက်ခါစတုန်းက ဝယ်သူသုံးစွဲသူတွေ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထည့်ပြီး ထိုင်မိတဲ့အခါ ဖုန်းအသစ်တွေ ကွေးကုန်လို့ ပြဿနာတက်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ်ထည်ပါးလွှာတဲ့ ဘယ်ဖုန်းမှာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သတိချပ်ရမယ်။ ဒါ့အပြင် ဘောင်းဘီနောက်အိတ်ထဲ ပေါ်နေတဲ့ ဖုန်းအကြီးတွေ ထိုးထည့်ထားတာဟာ အခိုးခံရနိုင်ခြေလည်း များပါတယ်။
သငျ့ ဖုနျး ကို အကွီးအကယျြ ပကျြစီးစနေိုငျတဲ့ အရာတှေ
စမတျဖုနျးတှေ တှငျတှငျကယျြကယျြ အသုံးပွုလာကွပမေယျ့ သှားလရော သယျဆောငျနိုငျတဲ့ ဒီကိရိယာလေးတှဟောလညျး စကျပစ်စညျးဖွဈတာကွောငျ့ အသုံးပွုတာ ပုံမမှနျရငျ ပကျြစီးတတျတယျဆိုတာကို ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျတှေ တဈခါတလေ မနေ့တေတျမှာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှမှော နာမညျကွီးဟနျးဆကျ အခြို့ ပေါကျကှဲခဲ့တာအပွငျ သုံးစှဲသူ ရဲ့ ပေါ့ဆမှုကွောငျ့ ဆုံးရှုံးမှုတှေ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ သာဓကတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အသေးအဖှဲပမေယျ့ ဖုနျးကို အကွီးအကယျြ ပကျြဆီးစနေိုငျတဲ့ အရာတှကေို စုစညျးတငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. နအေပူရှိနျကောငျးစှာရရှိသညျ့ ပွတငျးပေါကျ သို့မဟုတျ စားပှဲပျေါတှငျ ပဈထားခွငျးကွောငျ့ အပူရှိနျလှနျကဲခွငျး
ဟုတျပါတယျ။ ပွတငျးပေါကျ ကနေ စူးစူးရဲရဲကနြတေဲ့ နရေောငျခွညျဟာ သငျ့ရဲ့ ဖုနျးပျေါ တိုကျရိုကျကတြဲ့ အခါ အပူလှနျခွငျး (overheat) ဖွဈတတျပါတယျ။ အမွငျပိုငျးမှာ ဘာမှ မပွောငျးလဲပမေယျ့ အတှငျးပိုငျးမှာတော့ ဒီအပူခြိနျတှကေ ဘက်ထရီ နဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကို ကဆြငျးစပွေီး အဆိုးဆုံး အနအေထားအဖွဈ ခဈြပျဆကျကိုပါ လောငျမွိုကျစနေိုငျတယျ။
၂. တှကေ့ရာ Software မြားကို install ပွုလုပျခွငျး
Hardware အစိတျအပိုငျးတှကေ သငျ့ဖုနျးရဲ့ ကိုယျခန်ဓာအဖွဈ ဆောငျရှကျခြိနျမှာ Software တှကေ သူ့ကို ထိနျးခြုပျတဲ့ ဦးနှောကျနရောမှာ ရှိပါတယျ။ ယုံကွညျစိတျခရြခွငျး မရှိတဲ့ နရောတှကေ Software တှကေို download ဆှဲယူခွငျးဟာ ဖုနျးရဲ့ စှမျးရညျကို ဆိုးရှားစှာထိခိုကျနိုငျပွီး တဈခါတလမှော ကိုယျ့အခကျြအလကျတှေ အခိုးခံရတာ၊ RAM မနျမိုရီပမာဏကို ခိုးယူသုံးစှဲနတော စသဖွငျ့ ထိခိုကျမှုတှေ ရှိနိုငျတယျ။
၃. ဖုနျး အတှငျးပိုငျးကို စဈဆေးသနျ့စငျမှု မလုပျခွငျး
ကိုယျထညျ အသတေပျဆငျထားတဲ့ ဖုနျးအမွငျ့စားတှေ မဟုတျရငျ ကိုယျ့ရဲ့ ဖုနျးခှံကို ခှာပွီး သနျ့ရှငျးမှု ပွုလုပျပေးဖို့ မမသေ့ငျ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီလို ကိုယျထညျတှမှော မြားသောအားဖွငျ့ အတှငျးကို ဖုနျမှုနျ့ စတာတှေ ဝငျနပွေီး တဈခါတလေ ဆိုးဆိုးရှားရှား ပိတျဆို့နတေတျပါတယျ။ လကျကိုငျအိတျထဲ ထညျ့ထားတာ၊ ဘောငျးဘီအိတျထဲ ထညျ့ပွီး အပွငျသှားတာ စသဖွငျ့ ပွုလုပျလရှေိ့ရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျတိုငျ သနျ့ရှငျးရတာ ခကျခဲနရေငျ နားလညျတဲ့လူကို ပွပွီး သနျ့ရှငျးပါ။
၄. လမျးသှားနရေငျး ဖုနျးကို ထုတျကိုငျထားခွငျး
ဒါကတော့ ဟနျးဆကျကို တိုကျရိုကျထိတှမှေု့ထကျ ခိုးယူခံရဖို့ကို ပိုအားပေးနလေို့ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈမှာ ဖုနျးခိုးခံရမှု ၄၀% ဟာ ပိုငျရှငျက လူကွပျတဲ့ လမျးမပျေါ ထုတျကိုငျထားတုနျး လုခံရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူမြားတဲ့နရောတှမှော ဖုနျးပွောမယျဆိုရငျ နားကွပျတပျဆငျပွီး ပွောတာက ပိုသငျ့တျောတယျ။
၅. ကာဗာမပါဘဲ အိတျထဲ ထညျ့ထားခွငျး
ဖုနျးကာဗာအခှံတှဟော ဖကျရှငျသကျသကျမဟုတျပါဘူး။ သငျ့လကျကိုငျအိတျလို အရာဝတ်ထုမြားစှာ ပါဝငျနတေဲ့ နရောထဲ ရောကျတဲ့အခါ ဖုနျဒဏျ၊ ရဒေဏျ စတာတှကေို အတတျနိုငျဆုံး ကာကှယျနိုငျဖို့ပါ။ ဒါ့အပွငျ အငျတာနကျ အသုံးပွုနရေငျး လကျကိုငျအိတျပူပူလောငျလောငျထဲ ထညျ့ရငျလဲ Overheat ဖွဈတာ သို့မဟုတျ ထိမိပွီး malfunction ဖွဈတာတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။
၆. မူရငျးဘက်ထရီကို ဈေးပေါတဲ့ဟာနဲ့ မလဲဖို့
ဖုနျးဘက်ထရီတှကေတော့ ဟနျးဆကျတဈလုံးရဲ့ မျောတာပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွငျဆငျရမယျဆိုရငျ ငှကွေေး ကုနျကမြှာကို မနှမွောပဲ သခြောလလေ့ာပွီးမှ လဲလှယျဖို့ စဉျးစားပါ။ မူရငျးအစိတျအပိုငျးနဲ့ မတူညီရငျ ဘက်ထရီ သကျတမျးကို အကွီးအကယျြ လြော့ကစြပွေီး ကနျြတဲ့အစိတျအပိုငျးတှကေိုပါ ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။
၇. ဖုနျးရဲ့အပေါကျတှကေို ကိုယျ့ဘာသာထိုးဆှပွီး သနျ့ရှငျးမှု မပွုပါနဲ့
ဖုနျးရဲ့ စပီကာ စတဲ့အပေါကျတှထေဲ ဖုနျတှရှေိနတော ဘယျသူမှတော့ မကွိုကျပါဘူး။ ဖုနျးကို အပူခြိနျ မွငျ့တကျစသေလို စှမျးဆောငျရညျကိုလညျး ကစြတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ဘာသာ လမှေုတျစကျ၊ သံခြှနျ စတာတှနေဲ့ ဖွရှေငျးမယျ့အစား နညျးစနဈကကြ သနျ့ရှငျး၊ ဒါမှမဟုတျ ကြှမျးကငျြသူကို ပွပါ။ အထဲမှာ အငျမတနျ နုနယျသိမျမှတေဲ့ အစိတျအပိုငျးတှေ ရှိနဖေို့ သခြောပါတယျ။
၈. ဘောငျးဘီနောကျအိတျထဲ အမှတျတမဲ့ မထညျ့ပါနဲ့
iPhone6ထှကျခါစတုနျးက ဝယျသူသုံးစှဲသူတှေ ဘောငျးဘီအိတျထဲ ထညျ့ပွီး ထိုငျမိတဲ့အခါ ဖုနျးအသဈတှေ ကှေးကုနျလို့ ပွဿနာတကျရပါတယျ။ ဒါဟာ ကိုယျထညျပါးလှာတဲ့ ဘယျဖုနျးမှာမဆို ဖွဈနိုငျတယျ ဆိုတာ သတိခပျြရမယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘောငျးဘီနောကျအိတျထဲ ပျေါနတေဲ့ ဖုနျးအကွီးတှေ ထိုးထညျ့ထားတာဟာ အခိုးခံရနိုငျခွလေညျး မြားပါတယျ။
သင့် ဖုန်း ကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အရာတွေ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:09 AM Rating:5Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် စမတ်ဖုန်းတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြပေမယ့် သွားလေရာ သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဒီကိရိယာလေးတွေဟာလည်း စက်ပစ္စည်းဖြစ်တြာေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 3:09 AM